0-14 dagar: Första besöket - 1177
Första hälsobesöket på BVC vid 0-14 dagar - somaliska
Första hälsobesöket på BVC vid 0-14 dagar - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
Waxaa guriga idinku soo booqan doonaa kalkaaliso caafimaad oo ka socota rugta daryeelka caafimaadka dhalaanka BVC. Muddada lagu gudo jiro booqashada waxaa aad haystaa fursad aad kaga hadasho arimo ku saabsan ilmaha yar ee dhashey iyo macnaha inla noqdo waalid. Waxaa dhici karta in aad rabto in aad kalkaalisada kala hadsho arimo ku saabsan dhalmada, nuujinta, sida ilmaha cuntada loogu siiyo masaasada iyo xaalada guud ee caafimaadka qoyska. Kalkaalisda caafimaadku waxaa ay kuu sheegi doontaa macluumaad ku saabsan rugta daryeelka caafinaadka dhalaanka BVC, isla markaana waxaa ay idinla wadaagi doonta haddii uu jiro macluumaad ka yimid isbitaalka. Imaha waa la baadhi doonaa, waa la miisaami doonaa sidoo kale waxaa la cabiri doonaa dhumucda madaxa. Mudadad lagu gudo jiro booqashada guriga waxaa aad heystaa fursad aad ku baran karto kalkaalisada caafimaadka, fusada aad su’aalo ku weydiin karto iyo fursad aad ku heli karto macluumaad. Waxaa waalid kasta muhiim ah caafimaadka iyo koritaanka ilmihiisa.
Waxaa aad heli doontaa macluumaad ku saabsan sida loo yareyn karo halista dhimashada kadiska ee ku timaadaa carruurt sabiga ah, sida tusaale ahaan in carruurrta yaryar mar walba loo seexiyo dhabarka. Laakiin waxaa ay u baahanyihiin in ay caloosha u jiifaan muddo marka ay soo jeedaan.
Waxaa la idin wargalin doonaa arimo ku saabsan sida loo aamusiiyo ama sasabo carruurta yaryar iyo halistak u jirta in la ruxo ilmo yar.
Kalkaalisad caafimaadku waxaa ay idiin siin doontaa fiitamiin-D (D-vitamin), kaas oo ilmuhu u baahanyahay in uu qaat laga bilaabi marka uu jiro hal todobaad.
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsna dhimasha kadiska ee ku timaada carruurta sabiga ah – iyo talooyin ku aadan sida looga horatago (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsna sida loo yarey karo halista dhimashada kadiska ee ku timaada carruurta sabiga ah – lix talo oo loogu talogaley waalidka (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsna sida loo aamusiiyo ilmaha yar (svenska)
Halkan ka akhri macluumaad dheeri ah oo ku saabsa sida loogu diyaar garoobo booqashada (svenska)